သမီးရည်းစားစုံတွဲမှ ယောက်ျားလေးကို ရိုက်ပြီး မိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား.... - Myitter
ချစ်သူနှင့်အတူထိုင်ကာ စကားပြောနေစဉ် ၀၄း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အမည်မသိ လူ(၂)ဦးရောက်ရှိလာပြီး “နင်တို့ဘယ်သူတွေလဲ၊ ငါတို့က လူပျောက်ရှာနေတာ”ဟု ပြောဆိုကာ ရည်းစားဖြစ်သူ၏ဖုန်းမီးဖြင့် တရားလို၏မျက်နှာကိုထိုးခိုင်းပြီး ၎င်းတို့ရှာနေသော လူမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊
တရားလိုနှင့်ရည်စားဖြစ်သူမှာ ပြန်ရန်ထလာစဉ် အဆိုပါ အမည်မသိလူ(၂)ဦးအနက် ကတုံးဆံပင်(လူမြင်လျှင်မှတ်မိ)နှင့်လူမှ ရည်စားဖြစ်သူကို သစ်သားတုတ်ဖြင့်ရိုက်သောကြောင့် ကိုမှာ လဲကျသွားခဲ့ကြောင်း……
ထို့နောက် ဆံပင်ရှည်နှင့်လူမှ ကိုင်းခုတ်ဓားဖြင့် တရားလို၏ပခုံးပေါ်သို့ တင်ကာ “အော်ဖို့လည်း မစဉ်းစားနဲ့၊ ရုန်းဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ အော်ရင်သတ်ပစ်မယ်၊ ငါနဲ့လိုက်ခဲ့”ဟုဆိုကာ ရဲဘော်ဈေးပန်းခြံနောက်ဘက်သို့ ခေါ်ဆောင်ကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် တကြိမ်စီပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊
၎င်းနောက် ရဲဘော်ဈေးပန်းခြံနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဘန့်ဘွေးကုန်းဘုရားလမ်းမဘေးအနီးသို့ ထပ်မံခေါ်ဆောင်ကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် တကြိမ်စီထပ်မံပြုကျင့်ခဲ့ပြီး ထွက်ခွာသွားကြောင်း….
ယင်းကြောင့် အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သူ (၂)ဦးအား အရေးယူပေးပါရန်မက မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းခဲ့သည်။ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားလိုမ၏ ပြောပြချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ(၂)ဦး၏ ပုံသဏ္ဍာန် များအား အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများအား လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ …..
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ(၂)ဦးသည် ဇော်ရဲ၊ ၂၄ နှစ်၊ (ဘ)ဦးအေးကြိုင်နှင့် ခင်ဇော်၊ ၂၁ နှစ်၊ (ဘ)ဦးခင်ဌေး တို့ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသဖြင့် ၎င်းတို့(၂)ဦးကို ၁၇-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၈း၂၅ နာရီအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ တရားခံများအား ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။ Yangon Police
ခဈြသူနှငျ့အတူထိုငျကာ စကားပွောနစေဉျ ၀၄းဝ၀ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ အမညျမသိ လူ(၂)ဦးရောကျရှိလာပွီး “နငျတို့ဘယျသူတှလေဲ၊ ငါတို့က လူပြောကျရှာနတော”ဟု ပွောဆိုကာ ရညျးစားဖွဈသူ၏ဖုနျးမီးဖွငျ့ တရားလို၏မကျြနှာကိုထိုးခိုငျးပွီး ၎င်းငျးတို့ရှာနသေော လူမဟုတျကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ကွောငျး၊
တရားလိုနှငျ့ရညျစားဖွဈသူမှာ ပွနျရနျထလာစဉျ အဆိုပါ အမညျမသိလူ(၂)ဦးအနကျ ကတုံးဆံပငျ(လူမွငျလြှငျမှတျမိ)နှငျ့လူမှ ရညျစားဖွဈသူကို သဈသားတုတျဖွငျ့ရိုကျသောကွောငျ့ ကိုမှာ လဲကသြှားခဲ့ကွောငျး……
ထို့နောကျ ဆံပငျရှညျနှငျ့လူမှ ကိုငျးခုတျဓားဖွငျ့ တရားလို၏ပခုံးပျေါသို့ တငျကာ “အျောဖို့လညျး မစဉျးစားနဲ့၊ ရုနျးဖို့မကွိုးစားနဲ့၊ အျောရငျသတျပဈမယျ၊ ငါနဲ့လိုကျခဲ့”ဟုဆိုကာ ရဲဘျောဈေးပနျးခွံနောကျဘကျသို့ ချေါဆောငျကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈ တကွိမျစီပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး၊
၎င်းငျးနောကျ ရဲဘျောဈေးပနျးခွံနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရှိ ဘနျ့ဘှေးကုနျးဘုရားလမျးမဘေးအနီးသို့ ထပျမံချေါဆောငျကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈ တကွိမျစီထပျမံပွုကငျြ့ခဲ့ပွီး ထှကျခှာသှားကွောငျး….
ယငျးကွောငျ့ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခဲ့သူ (၂)ဦးအား အရေးယူပေးပါရနျမက မှျောဘီမွို့မရဲစခနျးတှငျ တိုငျတနျးခဲ့သညျ။ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ တရားလိုမ၏ ပွောပွခကျြအရ ပွဈမှုကြူးလှနျသူ(၂)ဦး၏ ပုံသဏ်ဍာနျ မြားအား အနီးအနားပတျဝနျးကငျြကြေးရှာမြားအား လိုကျလံစုံစမျးရှာဖှခေဲ့ရာ …..
ပွဈမှုကြူးလှနျသူ(၂)ဦးသညျ ဇျောရဲ၊ ၂၄ နှဈ၊ (ဘ)ဦးအေးကွိုငျနှငျ့ ခငျဇျော၊ ၂၁ နှဈ၊ (ဘ)ဦးခငျဌေး တို့ဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့(၂)ဦးကို ၁၇-၆-၂၀၁၉ ရကျနေ့ ၁၈း၂၅ နာရီအခြိနျတှငျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး၊ တရားခံမြားအား ဥပဒနှေငျ့အညီ တရားစှဲဆိုအရေးယူနိုငျရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သတငျးရရှိ ပါသညျ။ Yangon Police